Tierra del Fuego: ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ဇစ်မြစ်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 30/11/2021 10:34 | ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း
ခမ်းနားထည်ဝါပြီး ပိုမိုထူးခြားသော အမည်ကို ဖော်ညွှန်းသကဲ့သို့၊ Tierra del Fuegoအာဂျင်တီးနား၏ အသက်အငယ်ဆုံးပြည်နယ်၊ ၎င်းကို အစွန်းရောက်နယ်မြေဟု မသတ်မှတ်ပါက၊ အကွာအဝေးကြောင့်သာမက ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆက်သွယ်မှု ကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့်လည်း ကမ္ဘာ၏အဆုံးသတ်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဤကျွန်းသည် ယနေ့တိုင် လေယဉ်ဖြင့်သာ သွားလာ၍မရပေ။ ထူးခြားသော ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများရှိသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Tierra del Fuego၊ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် စူးစမ်းလိုစိတ်များအကြောင်း သိလိုသမျှကို ပြောပြရန် ဤဆောင်းပါးကို အပ်နှံပါမည်။
1 မူရင်းနှင့် Tierra del Fuego ၏သမိုင်း
3 Tierra del Fuego ၏ကန့်သတ်ချက်နှင့်လူဦးရေ
မူရင်းနှင့် Tierra del Fuego ၏သမိုင်း
Tierra del Fuego ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများသည် ကွဲပြားသည်။ ပင်မကျွန်း၏ မြောက်ဘက်ပိုင်းအများစုကို ရေခဲပြင်မြေပြင်၊ အဓိကအားဖြင့် ရေကန်များနှင့် moraines များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အမြင့် 180 မီတာအောက်. အတ္တလန္တိတ်ကမ်းရိုးတန်းနှင့် Magellan ရေလက်ကြားတို့သည် နိမ့်ပါးသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် တောင်ပိုင်းနှင့် အနောက်ဘက်အပိုင်းသည် ပင်မကျွန်းစုနှင့် ကျွန်းစုဖြစ်သည်။ အမြင့်ပေ 7.000 ကျော်ရှိသော တောင်တန်းများ ရှိသော အင်ဒီးစ်၏ တိုးချဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့် Sarmiento၊ Darwin နှင့် Tierra del Fuego တို့၏ တောင်ထူထပ်သော ရေခဲမြစ်များ။
ပင်မကျွန်းအလယ်တွင် အရွက်ကြွေသော ပျားတောကြီးရှိပြီး မြောက်ဘက်လွင်ပြင်တွင် မြက်ပင်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ 1520 တွင် ရေကြောင်းပြသူ Fernando de Magallanes သည် ၎င်း၏အမည်ဖြင့် ရေလက်ကြားကိုဖြတ်၍ ၎င်းကျွန်းများကို Tierra del Fuego ဒေသဟုခေါ်ဆိုသောအခါတွင် အဆိုပါကျွန်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ခရီးသွားအများအပြားသည် ထိုဧရိယာကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြသော်လည်း ဗြိတိသျှရေတပ်မှ ကျွန်းစုတစ်ခုလုံးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စစ်တမ်းကောက်ယူမှု မပြုလုပ်မီအထိ ဖြစ်ခဲ့သည်။ 1826 နှင့် 1836 ကြားတွင် ၎င်းတို့သည် စနစ်တကျ စကင်န်ပြုလုပ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ Magellan ခရီးစဉ်အပြီး နှစ်ပေါင်း 350 အကြာတွင် အဆိုပါဒေသသည် ၎င်း၏လူမျိုးများ၏ သိမ်းပိုက်မှုအောက်တွင် ရှိနေခဲ့သည်။ အင်ဒီးယန်း၊ Ona၊ Yahgan နှင့် Alacaluf အင်ဒီးယန်းများ။
အာဂျင်တီးနားကျွန်းစု၏ Tierra del Fuego ဒေသတွင် "ကမ္ဘာ၏အဆုံးသတ်" တွင်၊ ဥရောပအခြေချနေထိုင်ခြင်း၏ ရှင်းလင်းသောသမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ ရွှေ၊ ရေနံနှင့် အဓိက မြက်ခင်းပြင်များကို သိမ်းပိုက်နိုင်မှုကြောင့် ဥရောပသားများသည် ငွေရှာရန် မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ဤတောင်ဘက်စွန်းဒေသသို့ ရွက်လွှင့်ခဲ့ကြသည်။
ယနေ့ခေတ် အာဂျင်တီးနားတောင်ပိုင်းမြို့များသည် ဤကြွယ်ဝသောသမိုင်းကြောင်းကို အခြေခံထားသည်။ သို့သော် နိုင်ငံခြားသားများ မဝင်ရောက်မီက အမျိုးအမည်မသိသော အဖွဲ့အချို့ရှိခဲ့သည်။ Yaghan (သို့မဟုတ် Yamana)၊ Alacaluts နှင့် Ona လူမျိုးတို့သည် တစ်ချိန်က လှည့်လည်သွားလာခဲ့ကြသည်။ ဤဆိတ်ညံသောဒေသကိုဖြတ်၍ ပြင်းထန်သောရာသီဥတုအခြေအနေများကို ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့သည်။. တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့် အဏ္ဏဝါသယံ ဇာတများကို မှီခိုအားထားရာ ပြိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
Tierra del Fuego ၏ရာသီဥတုသည် နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် အေးမြအေးမြပြီး အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၊ Río Grande တွင် လက်မ 180 နှစ်အလိုက် မိုးရေချိန်လက်မ (4.600 မီလီမီတာ) မှ 20 မီလီမီတာ (XNUMX မီလီမီတာ) မှ သိသိသာသာကွာခြားပါသည်။ တောင်ပိုင်းနှင့် အနောက်ဘက်ပိုင်းဒေသများတွင် အသီးအရွက်များကို ရေညှိများနှင့် ချုံပုတ်များသာ ကန့်သတ်ထားသည်။
ဤဒေသရှိ ရာသီဥတုသည် နေထိုင်ရန် မသင့်တော်ပါ။ ၎င်းသည် တိုတောင်းပြီး အေးမြသော နွေရာသီ၊ ရှည်လျားပြီး စိုစွတ်သော ဆောင်းရာသီများ ပါ၀င်သည် (Köppen CFC ရာသီဥတု အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း)၊ အရှေ့မြောက်ဘက်မှာ လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီး တောင်နဲ့အနောက်တို့မှာ မိုးအနည်းငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ အများစုကတော့ လေထန်၊ မှိုင်းတိုက်ပြီး စိုစွတ်နေတတ်ပါတယ်။ မိုးရွာ၊ မိုးသီး၊ မိုးသီး၊ နှင်းမရှိသောရက်အနည်းငယ်ရှိသည်။
အမြဲတမ်းဆီးနှင်းမျဉ်းသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် 700 မီတာတွင် စတင်သည်။ Isla de los Estados သည် Ushuaia အရှေ့ဘက် ကီလိုမီတာ 230 အကွာတွင်ရှိပြီး မိုးရေ 1.400 မီလီမီတာရှိသည်။ အနောက်ဘက်တွင် တစ်နှစ်လျှင် ၃၀၀၀ မီလီမီတာ အပြင်းထန်ဆုံး မိုးရေချိန်ဖြစ်သည်။
အပူချိန်သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတူတူပင်ဖြစ်သည်- Ushuaia၊ နွေရာသီတွင် အပူချိန်သည် 9°C ထက်သာလွန်ပြီး ဆောင်းရာသီတွင် ပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ 0°C ဖြစ်သည်။ နွေရာသီတွင် နှင်းကျနိုင်သည်။ အေးပြီး စိုစွတ်တဲ့နွေရာသီက ရှေးဟောင်းရေခဲမြစ်တွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
တောင်ဘက်စွန်းရှိ ကျွန်းတွင် ပုံမှန် tundra ရာသီဥတုရှိပြီး သစ်ပင်များကြီးထွားခြင်းကို တားဆီးထားသည်။ ကုန်းတွင်းဧရိယာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် ဝင်ရိုးစွန်းရာသီဥတုရှိသည်။ Tierra del Fuego ၏တောင်ဘက်တွင် အလားတူရာသီဥတုရှိသည့် ကမ္ဘာ့ဒေသများမှာ Aleutian ကျွန်းများ၊ Iceland၊ Alaska Peninsula နှင့် Faroe ကျွန်းများဖြစ်သည်။
Tierra del Fuego ၏ကန့်သတ်ချက်နှင့်လူဦးရေ
အန္တာတိကနှင့် တောင်အတ္တလန္တိတ်နှင့် ဆက်စပ်သော Tierra del Fuego သည် အာဂျင်တီးနားပြည်နယ် ၂၃ ခုအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, နိုင်ငံကိုဖွဲ့စည်းထားသော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု ၂၄ ခုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် ၎င်း၏မြို့တော် Ushuaia နှင့် လူဦးရေအများဆုံးမြို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားဥပဒေပြုရေးနယ်မြေ 24 ခုထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အာဂျင်တီးနားပိုင်ကျွန်းဖြစ်သည်။
အာဂျင်တီးနား၏ တောင်ဘက်စွန်းတွင် တည်ရှိသော Patagonia သည် Tierra del Fuego မှ Antarctica အထိ ကျယ်ပြန့်သော ကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်း၊ သမုဒ္ဒရာနှင့် အန္တာတိကပိုင်နက်ကို သိမ်းပိုက်ထားပြီး၊ Staten ကျွန်း၊ ဖော့ကလန်ကျွန်းများ၊ တောင်အတ္တလန်တိတ်ကျွန်းများနှင့် အန္တာတိကကျွန်းဆွယ်တို့ အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ တြိဂံတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး၊ အလယ်ဗဟိုနှစ်ဖက်သည် 74°W နှင့် 25°W အထွတ်နှင့် တောင်ဝင်ရိုးစွန်း၊. အမေရိကတွင် ပြည်နယ်သည် မြောက်ဘက်တွင် ဆန်တာခရုဇ်၊ အနောက်ဘက်တွင် ချီလီ၊ တောင်ဘက်တွင် Beagle Channel နှင့် တောင်ဘက်တွင် ချီလီတို့ နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ အန္တာတိကပြည်နယ်သည် ချီလီအနောက်ပိုင်းနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော်လည်း နယ်နိမိတ်ကို မသတ်မှတ်ရသေးပေ။
လူဦးရေအတွက်၊ Darwin သည် ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်မှ လွတ်မြောက်ပြီး ကြမ်းတမ်းသော လုပ်ရပ်များကို လုပ်ဆောင်ကာ ဤယဉ်ကျေးမှုရှိ ထူးခြားသောလူမျိုးနှင့် ၎င်း၏ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော စရိုက်လက္ခဏာကို မီးမောင်းထိုးပြကာ ၎င်းတို့အား "ဤဆင်းရဲသောပြည်၏ အရှင်သခင်" ဘွဲ့အမည်ပေးခဲ့သည်။
Yaghan နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအရ ကွဲပြားသော ပထဝီဝင်အနေအထားအရ Ona သည် ကုန်းပေါ်တွင် နေထိုင်သူများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် အဓိကအုပ်စုနှစ်စုရှိသည်- Hausch နှင့် Selk'nam။ နောက်ပိုင်းတွင် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိကာ တစ်ခုမှာ မီးမြစ်မြောက်ဘက် ကန္တာရလွင်ပြင်တွင် တည်ရှိပြီး ကျန်တစ်ခုမှာ တောင်ပန်းခြံနှင့် သစ်တောဧရိယာတွင် တည်ရှိသည်။
ကမ်းရိုးတန်းဒေသများရှိ လူများနှင့်မတူဘဲ၊ ဤလူများသည် ကြီးမားပြီး အမဲလိုက်သည့် ဂွာနာကိုနှင့် တူကိုတူကို (လေးနှင့်မြှားတို့ကို လက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုသည့် ကြွက်) များဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် အာဂျင်တီးနား၊ ဤဌာနေတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများ၏ ခြေရာကို သင်မတွေ့ရတော့ပါ။ ဂြိုလ်၏ ဧည့်ဝတ်မကျေသော ထောင့်တွင် ရှင်သန်နေသော Yaghan၊ Alacaluts နှင့် Ona သူတို့သည် ခိုင်ခံ့မြဲမြံသော လူများဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ သို့သော် ဤအရည်အသွေးများသည် ရောဂါများနှင့် နိုင်ငံခြားယဉ်ကျေးမှုများ ဝင်ရောက်လာမှုမှ သူတို့ကို မကာကွယ်နိုင်ပေ။
စပိန်မှ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အခြားဥရောပအခြေချနေထိုင်သူများမှ ဤသမိုင်းဝင်ယဉ်ကျေးမှုများကို လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ဥရောပရောဂါသည် လူဦးရေ အများအပြားကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။ကျန်ရစ်သူများသည် ယဉ်ကျေးမှု ပျက်ဆီးမှု ပြဿနာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် သင်သည် Tierra del Fuego နှင့် ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း » Tierra del Fuego